Myo Myint Kyaw's Likes - Myanmar Network
Myo Myint Kyaw's Likes
Back to Myo Myint Kyaw's Page
သင့်အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာက ဘာလဲ လူသားတွေရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်ကြီးတွေထဲမှာအရေးကြီးဆုံးက ၀င်ငွေ (Income) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အရေးကြီးဆုံး ၀င်ငွေကို ရှာဖွေကြရာမှာ နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ရှိပါတယ်။ ၀င်ငွေလုံးဝမရှိသေးသူများဟာ အလုပ်အကိုင် (Job) တစ်… Discussion သင့်အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာက ဘာလဲ4Likes
သားကောင်းရတနာ သားကောင်းရတနာ သားကောင်းရတနာဟူသည် နိုင်ငံနှင့်ချီ၍ပြောမည်ဆိုလျှင် အမျိုးသားလည်းပါသည်၊ အမျိုးသမီးလည်း ပါသည်။ ကလေးသူငယ်လည်း ပါသည်။ လူငယ် လူရွယ်လည်း ပါသည်။ လူကြီးသူကြီးများလည်း ပါသည်။ အရိုးရှ… Discussion သားကောင်းရတနာ4Likes
Vocabulary ထမင်းစားခန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အင်္ဂလိပ်စာဝေါဟာရများ (Posted on 15 September 2015) - <a href="http://www.myanmar-network.net/forum/topics/dining-room">http://www.myanmar-network.net/forum/topics/dining-room</a> Vocabulary Skills : ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာ ဝေါဟာရများ (၂… Discussion Vocabulary 31 Likes
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဘာတွေလိုမလဲ “အစ်မရေ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ဘာတွေလိုမလဲ” တဲ့ ဒီမေးခွန်းကို သူငယ်ချင်းတချို့က ကျမကို မေးကြတယ်။ ကျမအမြင်ကတော့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း United Nations၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတွေ NGOs (INGO… Discussion လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဘာတွေလိုမလဲ 30 Likes
Vocational Education for Youth စကားဝိုင်း ၁) လူငယ်များအတွက် ၁.၁) Switzerland နိုင်ငံတွင် သင်ကြားနေသော Dual Education &amp; Training စနစ်များအတိုင်း သင်ကြားပေးသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး သင်တန်းကျောင်းကြီး ၁.၂) အလုပ်လုပ်ရင်း ပညာသင်ကြားခွင့်ရမ… Discussion Vocational Education for Youth စကားဝိုင်း 1 Like
Studying new language I m not native to english. Eng is not though not very new for me since we have been in touch with english from childhood. So I can speak or write. I dont think that my eng is very bad. But there is… Discussion Studying new language4Likes Recruitment Officer
Location : North Dagon, Yangon, Myanmar
Period : Fixed term contract based on project…
Blog Recruitment Officer 1 Like Manager များအတွက် Employee Engagement Tips Engagement (E-N-G-A-G-E-M-E-N-T) Encourage သင့်ရဲ့teamအနေနဲ့ ကြီးမားတဲ့ပံပိုးမှုတွေ၊ ထောက်ပံ့မှုတွေရှိတယ်လို့ ခံစားရပါစေ။ အလုပ်တွေကိုလည်း ပိုပြီးတော့ ကြိုးစာလုပ်ကိုင်လာအောင် ပံ့ပိုးမှုတွေပေးပါ။ သင့်ဝန်ထ… Discussion Manager များအတွက် Employee Engagement Tips5Likes ဝန်ထမ်းမြဲအောင် ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ကြသလဲ [Zawgyi] ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာ၊ အဖွဲ့အစည်းမှာ ဝန်ထမ်းမြဲအောင် ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ကြပါ သလဲ။ ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး ရှိကြပါလိမ့်မယ်။ ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ အဓိကအချက်ကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ Comfort Zo… Discussion ဝန်ထမ်းမြဲအောင် ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ကြသလဲ3Likes
FB Page Ads ကျနောကတော့ #entrepreneurship ဆိုတဲ့စကားလုးံကိုစိတ်ဝင်စားလာတာ ၁ ကျော် ၂နှစ် ထဲရောက်လာခဲ့ပါပြီ ၊ ကိုယ်တိုင်လဲ ဒီ လုပ်ငန်းကိုလုပ်ချင်ပါတယ် ၊ အရင်းအနှီးလဲ လုံလောက်အောင်မရှိပါဘူး ၊ online ကနေလဲ social med… Discussion FB Page Ads 1 Like
လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခု စတော့မယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခု စတော့မယ်ဆိုရင်… (၂၀၁၄)လောက်တုန်းက ညီမငယ်တစ်ယောက်က ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တစ်ခု စချင်လို့ ဆိုပြီး အကြံတောင်းဖူး တယ်။ သူက (Hotel Life) ထဲကပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာ အဆင်ပြေနေပေမယ့် (Life style) ချိန်… Discussion လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခု စတော့မယ်ဆိုရင် 1 Like Complain ဆိုတာ Complain ဆိုတာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေရသည့် လုပ်ငန်းမှ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် (Customer Right) နှင့် (Complain) ဆိုသော စကားတို့ကို နားမခါးသည့်တိုင် နားမဆန့်အောင်တော့ ကြားနေရမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းငယ်ဘဝတွင… Discussion Complain ဆိုတာ6Likes ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခု စတင်ကြရာဝယ်… ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခု စတင်ကြရာဝယ်…. ရည်ညွန်းတာကတော့လူငယ်တွေလက်တဲ့စမ်းချင်တဲ့သူတွေ။ငွေရှိပြီးဘာလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့သူတွေ။ဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ငြီးငွေ့လာကြတဲ့သူတွေစတဲ့သူတွေအတွက်နည်းနည်းလောက် အသုံးတည့်ခဲ့ရင်ပဲ… Discussion ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခု စတင်ကြရာဝယ်… 34 Likes
ပညာကို တန်ဖိုးထားပါ "ပညာကို တန်ဖိုးထားပါ" ကျနော်တို့ ပညာသင်ယူနေရတဲ့ အချိန်ဆိုရင် အရမ်းကို ပင်ပန်းလှပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျနော်တို့သင်ယူထားတဲ့ ပညာတတ်မြောက်သွားလို့ ပညာနဲ့လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတဲ့ အချိန်ကျရင်တော့ ပညာမတတ်သူတွေထက်… Discussion ပညာကို တန်ဖိုးထားပါ 11 Likes "Exploring English: Language and Culture"ြ… ဗြိတိသျှကောင်စီမှ "Exploring English: Language and Culture - အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ ဘာသာစကား နှင့် ယဉ်ကျေးမှု" ဟုအမည်ပေးထားသော အင်တာနက်ပေါ်မှ အခမဲ့သင်ကြားပေးမည့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်တန်း တစ်ရပ်ကို… Discussion "Exploring English: Language and Culture"ြ… 41 Likes Embassy of the Czech Republic in Yangon offe…
Position Title: Economic…
Blog Embassy of the Czech Republic in Yangon offe… 1 Like Index of articles and English lessons Idioms &amp; Useful Expressions Speaking and Communications Skills Articles Vocabulary Writing Skills Presentation Skills English for Hotel and Catering Industry Business English Practical English… Page Index of articles and English lessons 336 Likes Graded Reader Collection မန္တလေးဗြိတိသျှကောင်စီအနေဖြင့် အသင်းဝင်များနှင့် စာဖတ်သူများအတွက် Graded Readers Collection ကို အသစ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ အသင်းဝင်များ ငှားရမ်းဖတ်ရှုနိုင်ပြီး အသင်းဝင်မဟုတ်သူများအနေဖြင့် စာကြည့်တိုက် အ… Discussion Graded Reader Collection 1 Like Sandar Hlaing Member Sandar Hlaing4Likes Myanmar Network Moderation Guidelines Moderation Guidelines Myanmar Network aims to encourage vibrant discussions amongst our online community, of all backgrounds and beliefs, about the important issues affecting our communities. It is… Page Myanmar Network Moderation Guidelines 36 Likes ​ရှာ​နေ​တာ​က ​အ​လုပ်​ကောင်း​ကောင်း၊ ​လ​စာ​ကေ… ​လူ​ငယ်​တွေ​တော်​တော်​များ​များ​အ ​လုပ်​ကောင်း​ကောင်း​နဲ့ ​လ​စာ​အ​လွန် ​ကောင်း​တဲ့​အ​လုပ်​ကို​လို​ချင်​ကြ​ပါ​တယ်။ ​အဲ​ဒီ​အ​တိုင်း​ပဲ ​အ​လုပ်​ရှာ​ဖွေ​တဲ့​အ​ခါ ​လ​စာ ​များ​တဲ့​ကု​မ္ပ​ဏီ၊ ​အ​လုပ်​ကောင်း​… Discussion ​ရှာ​နေ​တာ​က ​အ​လုပ်​ကောင်း​ကောင်း၊ ​လ​စာ​ကေ… 30 Likes